Ukuhlelwa kokuzijabulisa kudala imibuzo eminingi kubakhamuzi. Akusikhathi njalo kucacisa ukuthi ufuna ukuchitha isikhathi sakho samahhala. Abanye bakhetha ukuphumula okusebenzayo, othile uthanda ukuhlala ehhotela endaweni enhle kakhulu. Futhi abanye bakhetha ukuphathwa. Kodwa yenza ngokududuza. Ngenhlanhla, manje ithuba elinjalo liyatholakala kubantu abaningi. Kwanele ukuya esikhungweni sempilo. Isibonelo, ku "Krainka". Yini lesi sikhungo esinganikeza? Ingabe banelisekile yizivakashi? Ukuze uqonde konke lokhu kuzosiza ukubuyekezwa okuningi kwezivakashi, okuyinto minyaka yonke ngaphezulu nokuningi. Ngokuvamile abavumelani nokukhangiswa kwalendawo yokuphumula - kubonisa kuphela ukuhleleka nokwenyuka, kanye namathuba omsebenzi wesakhiwo. Kodwa iziphetho kufanele zenziwe ngokuzimela.
Ngakho-ke, sinesithakazelo ku-Krainka (sanatorium, esifundeni saseTula).
Ukuphumula nokuhlela kwakhe eziningi kubangela izinkinga. Ngihlale ngifuna ukuba nesikhathi esihle futhi ngikwenze ngenzuzo. Usizo ekubhekaneni nalolu daba, izindlu ezihlukahlukene zebhodi nezindawo zokungcebeleka zezempilo. Isibonelo, i-sanatorium-resort "Krainka" yesifunda saseTula.
Kuyini? Indawo okuhloswe ngayo ukuphumula, ukuzijabulisa kanye nokwelapha kanyekanye izakhamizi zaseRussia. Itholakala eduze kwe-Tula, okukuvumela ukuthi uyifinyelele kalula futhi kalula. Lapha uzosiza ukuthuthukisa impilo yakho. Kodwa uma kungekho mgomo onjalo, ungakwazi ukumane uhambe lapha njengendawo yokubhuka.
"Krainka" idume ngodaka lwe-peat, kanye namanzi okuphulukisa okuyisimangaliso. Uma ufika lapha, ungaphumelela ngempela.
Njengoba umkhuba ubonisa, i- "Krainka" (indawo yesineti, isifunda saseTula) ifaneleka ngamaholide omndeni. Kodwa ngezingane ezincane kakhulu azihambanga lapha, kodwa kusukela ezinganeni ezingu-4-5 usuvele uphumula kule ndawo. Kunabantu abaningi asebekhulile lapha, futhi, lokhu akukhathazi muntu. "Krainka" iyindawo efanelekayo wonke umuntu. Khona-ke ngeke ube nesithukuthezi!
Uphi i-Krainka (sanatorium) ekhona? Isifunda saseTula, isifunda saseSuvorovsky, ehlathini, eduze nesikhungo sesifunda. Kulapha ukuthi ungabona le ndawo yokuphumula. Awekho amakheli aqondile. Akunzima ukufika esikhungweni bese weqa indawo yokuhlenga phakathi kwendawo enokhuni.
Sithole ncamashi lapho i-"Krainka" (sanatorium) itholakala, isifunda saseTula. Ungafika kanjani lapha, ukuze ungaphuthelwa le ndawo yokuvakasha endleleni? Kunezindlela eziningana zokwenza lokhu.
Okukhethwa kokuqala wuhambo oluvela eMoscow. Lapha udinga ukuthatha ibhasi laseMoscow-Krainka, elihamba ngo-15: 30 nsuku zonke. Kudingeka ushiye isiteshi sebhasi "Novoyasenevskoye". Ibhasi lizokuthatha ngqo ehhotela.
Kusuka ku-Tula, ungase futhi ufike ngokusheshisa ku "Krainka". Futhi ungenza lokhu ngebhasi eligijima umzila we-Tula-Krainka. Uhamba ngo-13: 00 nsuku zonke.
Kanti futhi ukusuka ku-Kaluga, ungafika kule ndawo ngezingxenyana ezimbalwa. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuya eSuvorov ngebhasi Kaluga-Suvorov, lapho ushintsha khona ukuhambisa, okulandela iKekkalin, iStaroselya noma iMitin plant. Ukuphuma kuyadingeka ekumeni "iNew Cherepet" (Krainka). Amabhasi agijima ngezikhathi zamaminithi angu-60.
Njengoba ubona, akunzima kakhulu ukufika esibhedlela "Krainka" esifundeni saseTula ngokuthutha umphakathi. Kodwa emotweni yakho ukuze wenze indlela engcono nge-GPS-ye-navigator. Ngokushesha usiza ukuxazulula umbuzo obhekene nawo.
Ungathintana kanjani nalesi sikhungo? Ungasebenzisa izindlela eziningana zokuxhumana.
Okokuqala ukugcwalisa ifomu lempendulo kwiwebhusayithi yenhlangano ebizwa ngokuthi "Krainka" (sanatorium, esifundeni saseTula). Ungathola amasimu ahambelana nesigaba "Oxhumene nabo". Zizovela ngakwesokudla kwesikrini. I-sanatorium ithola izibuyekezo ezinhle mayelana nale nsizakalo. Amakhasimende aphendule ngempela yonke imibuzo ephakama. Impendulo kuphela kuyodingeka ilinde izinsuku ezimbalwa.
Ngakho-ke, izingcingo zocingo zifuna kakhulu. Ukuze ufinyelele ku-Krainka, sebenzisa izinombolo 7 (487) 635-55-31 noma 7 (487) 635-55-24. Umlawuli uzophendula yonke imibuzo yakho. Uma ufuna, ungakwazi ukubhuka igumbi ngqo ngefoni.
Ngendlela, ngokusebenzisa indawo ethi "Krainka" yokubhuka kungenzeka. Ukuze wenze lokhu, khetha inombolo, bese uchofoza inkinobho ethi "Book". Faka ulwazi lakho lomuntu siqu, bese uqinisekisa isicelo. Futhi yilokho konke. Kungenxa yale ndlela yesimanje ukuthi ukubuyekezwa kwehhotela laseKrainka (sanatorium, Russia, Tula) kuhlala lihle.
Yini enye okufanele ngiyiqaphele ngaphambi kokuxhumana nalesi sikhungo? Iphuzu elibalulekile yiqiniso lokuthi izinqubo zokwelapha. Ngemuva kwalokho, uma ucabanga ukuthi "iKrainka" njengenkundla yokuhlanza, kuwukuthi ukwelashwa okudingayo ukuqinisa ukugxila kwakho. Linikeza le ndawo?
Njengomkhuba wokubonisa, i-resort isebenzisa izindlela zokwelashwa ngodaka lwe-peat namanzi asebenzisa imithi. Ngakho, lapha ungathola usizo lwabachwepheshe endle:
Kuphawulwe ukuthi le ndawo ihambelana kahle nokuphumula okuvamile nokujwayelekile kombuso womuntu wengqondo. Nansi indawo yonke futhi ewusizo - "Krainka" (sanatorium, esifundeni saseTula). Yini enye angayinika?
Lesi sikhungo sinezinqubo ezikhethekile ukuthi ama-sanatoria amaningi afanayo angeke anikele. "Krainka" esifundeni saseTula (ekwelapheni) okuvelele phakathi kwezici zayo:
Futhi lolu hlu lwamathuba walesi sikhungo alukhawulelwanga. Izindawo eziboniswa nje nje zivame ukuthakazelisa abantu. Kubo, inhlangano ithola impendulo enhle kakhulu. Ngemuva kwe-LLC "I-Sanatorium-resort" i-Krainka "(isifunda saseTula) indawo ongathola ngayo usizo olunzulu futhi uzihlele ukuphumula okuhle.
Ukuzilibazisa kudlala indima ebalulekile kunoma yiliphi i-resort. Kuphawulwe ukuthi "iKrainka" ayifani neze nezindawo ezifanayo, kodwa kuyamjabulisa amaklayenti. Izivakashi zikhombisa ukuthi ngeke ube nesithukuthezi lapha - kukhona okumele ukwenze njalo. Phakathi kwamakhono enhlangano, umuntu angakwazi ukuhlukanisa ubukhona be:
Izindawo zokudlala zezingane;
Konke lokhu kusevisi yakho. Kukhona nedamu lokubhukuda ne-intanethi. Isakhi senkambiso senziwa futhi - amakhonsathi ahlukahlukene kanye nezinye izenzakalo zomphakathi ngaphakathi kwenhlangano zihlala njalo. Indawo yokuvakasha inikeza izivakashi zayo izindlela ezihlukahlukene, okujabulisa amakhasimende.
I-Sanatorium-resort "I-Krainka" yesifunda saseTula indawo evumela ukuthi wena uphumule ngempilo enhle. Kodwa kubalulekile nakweziphi izimo. Ngempela, ngifuna ukuba endaweni lapho induduzo enkulu yezivakashi iqinisekisiwe. Inhlangano ingahlinzeka ngani ngalokhu?
Njengoba umkhuba ubonisa, kakhulu. Okokuqala, unelungelo lokubhuka amakamelo noma ngaphandle kokwelashwa. Intengo yosuku lokuhlala iyoxhomeke kulokhu. Kodwa mayelana nalokhu ngemuva kwesikhashana. Okwesibili, kunamakamelo azo zonke izintandokazi. Kuphawulwe ukuthi yonke indawo ilula futhi ihlelekile, ifenisha entsha, kukhona konke okudingekayo ukuze kube nokuphila okunethezeka.
Amakamelo angashadile, kabili futhi kathathu. Ngisho nomndeni noma inkampani encane iyoba nendawo yokuhlala. Ukujabulela izivakashi kubangela ukuthi kungenzeka ukubhuka amakamelo amaningi (ngamakamelo amabili). Ungakwazi ukukhetha njalo inketho ebonakala ibonakala kakhulu.
Siyakujabulela ukuthi zonke izinsiza zingaphakathi kwamakamelo. Azikho izindlu zangasese zomphakathi noma izikhumba. Konke kwenziwa ukuze kududuze izivakashi. Yiqiniso, ezinkundleni zisekhona izibuyekezo ezibonisa ukugqoka ifenisha kanye "nokuchithwa" esimweni. Le nkinga inqunyelwe iminyaka eminingana. Futhi amakhasimende akanayo izikhalazo mayelana nesimo esibucayi.
Ingakanani "i-Krainka" (indawo yesineti, isifunda sase-Tula) inikeza iholidi elibizayo? Izintengo zamakamelo lapha ziguqukayo. Zixhomeke ezintweni eziningi. Nokho, njenganoma yikuphi okunye okusetshenziselwayo. Kodwa ngokujwayelekile, izivakashi zaneliseka ngezindleko zokuzilibazisa.
Njengoba sekushiwo, ungathatha inombolo noma ngaphandle kokwelashwa. Esikhathini sesibili, usuku lokuhlala luzoba eshibhile. Amathegi wamanani asethwe ngobukhulu obulinganiselwe. Ngempela, "uKrainka" akuyona indawo yokuphumula ebhajethi. Intengo isabonakalisa isikhathi sokufika kwakho - ngezikhathi ezithile izindleko ziphakama. Okujwayelekile, nakuba kuphazamiseka kancane, into evelele.
Ngokwesilinganiso, ikamelo elilodwa (inkanyezi eyodwa) lizobiza ama-ruble angu-1900 ngosuku ngaphandle kokwelashwa, futhi ngo-2700 - nayo. Futhi uma ufuna ukuphumula nomuntu ombhangqwana, khona-ke ekamelweni eliphindwe kabili (ngaphandle kwezinqubo) kuzomele ukhokhe okungenani 1200 (umnotho) noma u-1500 (ama-ruble avamile). Ngokuphathwa kosuku yi-2000 nama-ruble angu-2300, ngokulandelana. Akuningi kakhulu, uma ucabanga ngakho. Futhi lokhu kujabulisa abaningi.
I-Sanatorium "Krainka" (isifunda esifundeni se-Tula) ibuyekezwa futhi ithole indlela yokudla ngayo kule sikhungo. Kuphawulwe ukuthi kukhona ukudla okuyisithathu ngosuku. Iphilile ngokuphelele futhi ihlukene. Akuyona yonke into, ekhishini okufanele ifande, kodwa akukho lutho olungenakuqhathaniswa kule sanatori. Izingane zinikelwa ukudla okwesine ngosuku. Konke lokhu kufakwe emalini.
Ezinye izidlo zibekiwe kuphela ngenhloso odokotela abasebenza eKrainka. Kuvela ukuthi kule nhlangano ungadla okumnandi, okuwusizo futhi usenciphisa isisindo! Yilokho okudingayo okuningi!
Ngakho sazi ukuthi yikuphi ukuphumula nokwelashwa okusemgumbini wokushisa "Krainka" (esifundeni saseTula). Le ndawo enhle, ejabulisa abaningi. Ukungahambi kahle kulesi sakhiwo cishe akusho.
Ingabe kufanelekile ukuya lapha? Uma ufuna ukuphumula ehlathini, kodwa endaweni ekhululekile, ukuphupha odakeni lokudaka nokudla okunempilo ngamanani aphansi, bese kuthi "uKrainka" iphelele kuwe. Ngeke uzisole ngokuphumula lapha. Ungafika nabangani noma umndeni. Amakilasi lapha azoba wonke umuntu.
IBulgaria ngoSeptemba. Isimo sezulu e-Bulgaria ngo-September. Ukuphumula, amanani, ukubuyekezwa